Dadka reer Derbent waxay rabaan in Mashruuca Ropeway la dhamaystiro | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 KocaeliDadka reer Derbent waxay rabaan dhammaystirka mashruuca xarig-jarka
22 / 11 / 2019 41 Kocaeli, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, TELPHER
derbent halki wuxuu doonayaa in mashruuca xariga laga dhammeeyo
Derbentliler, sababaha dhaqaale ee loogu talagalay dhismaha mashruuca xariga, oo la joojiyay, ayaa doonaya inuu dib u soo iibiyo. Mukhtaar Erdal Baş wuxuu lahadlay masuuliyinta dhameystirka mashruucan.
Si toos ah ula xiriir ozgurSida lagu sheegay warbixinta Cemalettin Ozturk; Al Madaxa madaxa Kartepe Derbent Neighborhood Erdal Baş ayaa la hadlay wargeyskeena kadib markii la joojiyay riyadii 50 ee sanadlaha ahayd ee mashruuca xariga. Baş wuxuu yiri, uz Waxaan dooneynaa mashruuca xarig ee uusan qandaraasluhu u fulinin sababo dhaqaale ka dibna baajiyo. Mashruucu wuxuu u keeni lahaa dhaqdhaqaaq weyn xaafaddeena. Waxaan rabnaa odayaashayada magaalada inay mashruucan sameeyaan. ”
50 DREAM DREAM
Sheekada Mashruuca Jidadka ee u dhexeeya Derbent iyo Kuzuyayla waxay dib ugu laabatay 50 sano ka hor. In kasta oo isku day la sameeyay xilliyo kala duwan, haddana mashruuca lama fulin karin. Hüseyin Üzülmez, oo loo doortay Duqa Magaalada Kartepe doorashadii deegaanka ee 2014, wuxuu ku qaatay howlo badan dhismaha mashruuca gawaarida fiilada. Qandaraaska waxaa la qabtay bishii Sebtember ee 2017. Qandaraasyada waxaa gudbiyey Valter Elevators oo ka socda Ankara. Riyada sanadka ee 50 ee mashruuca xarig ayaa loo dhigay xaflad weyn oo lagu qabtay 10 Diseembar 2018. Shirkaddu waxay ku dhawaaqday inay dhammayn doonto mashruuceeda xadhka-goosadka bisha Febraayo 2020.
100 MILLION WAXAA LAGA QAADO
Mashruuca weyn, ee raaci doona Izmit Bay iyo Sapanca Lake isla waqtigaas si loo gaaro kulanka buuraha Samanlı, ayaa waxaa lagu dhisi lahaa habka dhisidda-u-wareejinta waxaana la filayay inuu ku kiciyo 100 milyan ginni. Xariiqda mitirka 4 kun ee 960 inta u dhaxaysa Derbent-Kuzu Yayla promenade, oo ah marxaladda koowaad ee dariiqa loo qorsheeyay in lagu dhisayo laba marxaladood, ayaa lagu hawlgali doonaa sanadka 29. Kadib marka la dhammeeyo marxaladda koowaad ee mashruuca laba-jid-waddo ee loo maro xarigga 3, marxaladda labaad waxaa lagu qaban doonaa inta udhaxeysa SEKA Camp iyo Derbent.
MAYA WAX KASTA
Eleterators Valter, oo ku guuleystey qandaraaska, wuxuu sidoo kale sameeyay mashruucyo gawaarida fiilada ee xarumo badan oo caan ah oo adduunka ah. Ka dib aasaaska mashruuca xarig-jarka ee u dhexeeya Derbent iyo Kartepe Kuzu Yayla, kaas oo ay shaqeyn doonaan muddo 29 sanado ah, shirkaddu ma aysan bilaabin wax shaqo ah. Dawlada hoose ee Kartepe ayaa dhawaan burisay qandaraaskeedii shirkad aan cid cidlo ah cidna u yeerin sababo dhaqaale awgood.
Isaga oo lahadlayay wargeyskeena kadib markii la joojiyay mashruucii xariga jarista Derbent Headman Erdal Baş, wuxuu sheegay inay aad uga caroodeen joojinta mashruucan. Isaga oo la hadlaya wargeyskeena Baş, “sanado badan oo shaqo ah kadib waxaa la keenay marxaladda mashruuca gawaarida fiilada. Aasaaska ayaa la dhigay. Xitaa tani waxay ahayd dadaal aad u weyn oo macno leh. Aad ayaan ugu faraxsan nahay sida dadka xaafadda. Sababta oo ah bilowga khadka khadka fiilada ayaa ku sugnaa xaafadeena. Degaankeenna ayaa horumarin lahaa, xirfadaheena ayaa badin lahaa. Waxaan aad uga xunahay in mashruuca la joojiyay. Waxaan rajeyneynaa in odayaashayada magaaladu ay mar kale soo saaraan hindisooyin iyo in mashruuca la soo gabagabeeyo ”.
RE-Tender- Duqa magaalada Kartepe Mustafa Kocaman, shirkaddu ma awoodo inay fuliso meheradda, laakiin waxay ka qoomameeyeen mashruucii uu ballanqaaday inuu markale dhiiban doono.
FOUNDATION IN 2018 - 50 riyada sanadlaha ah ee Mashruuca gawaarida Kartepe ee 10 2018 Diseembar XNUMX Duqa Magaalada Ibrahim Karaosmanoğlu, Musharaxa Duqa Magaalada Metro Tahir Büyükakın, Gudoomiyaha Gobolka AK Party Abdullah Eryarsoy iyo Duqa Magaalada Kartepe Hüseyin Üzülmez ayaa la furay.
Buuxinta mashruuca tareenka ee BTK ee 2015
Dadka Avsallar waxay doonayaan asfalt
Qorshaha Derbent waa Xarunta Dhexe ee Aladağ
Mashruucyo Xaddidan oo Qaabilsan ayaa lagu qaban doonaa Derbent Aladağ Ski-ga Center-ka Sannadkan
Degmada Derbent ee Konya ayaa dib loo dajiyay
Derbent Xarunta Alaadag Ski
Waddada derbent furay
Jirdilku wuxuu ku sii socdaa albaabka Derbent
Xarunta Tababaraha ee Derbent mar kale way xirantahay
Xarun Derbi oo la furi doono dhamaadka Oktoobar
Mashruuca Gawaarida Dadweynaha ee Agabka Dadweynaha ee Derbent
Derbent-Kuzuyayla Mashruuca Telefoonka
Khadka telefoonka ee kartepe
OMSAN waxay ka heshay Abaalmarinta 3 Abaalmarinta Atlas Logistics Awards
Xawaaraha Internetka ee Xawaaraha Sare wuxuu ku socdaa Tareennada Ruushka